Trollhättan oo lugu qabtay siminaar looga hadlayey soomaalida Iswiidhan | Somaliska
Trollhättan oo lugu qabtay siminaar looga hadlayey soomaalida Iswiidhan
Inkastoo dadka soo qeyb galay siminaar loogaga hadlayey soomaalida iyo dhaqankooda iyo is dhexgalka, oo ay aad u koobneyd haddana wuxuu ahaa mid lugu doonayey in lugu iftiimiyo farqigga u dhaxeeya soomaalida iyo dadka ay u soo hayaameen oo ay wax badan ku kala duwan yihiin.
Siminaar-kan oo shalay lugu qabtay hoolka shirarka ee Folks Park ee ku yaala magaaladda Trollhättan, ayaa waxaa soo qaban qaabiyey jaaliyadda Midnimo ee magaaladaasi kadhisan. Siminaarkan oo ku baxayey afka iswiidhish-ka. ayaa waxaa hagayey Qalinle Dayib oo isagu ah aqoonyahan bartay culiinta cilmigga bulshadda.
wuxuu si kooban uga hadlay qaab dhismeedka u dhisan yahay suuqa shaqada, aqoonta laga doonayo qofka shaqo doonka ah, cunsuriyadda iyo fahan darro ka heysata shaqaalaha ka shaqeeya hey’adaha kala duwan soomaalida iyo caadadooda.
Wuxuu sidoo kale sheegay in aan la oran karin soomaalida malaha dhamaantood aqoon iyo xirfad ay ku , wuxuu farta ku fiiqay ineey jiraan dadyow badan oo xilliyo kala duwan dalka yimid qaarkoodna ay ku dhasheen ay aqoonta meel sare ka gaaren.
Dhaqanka oo ah kan haga isbadalka bulsho.
Dhaqanka soomaalida oo ah mid adag oo inta badan soomaalidu heeysato, ayuu aqoon yahanku ku tilmaamay mid aan had iyo jeer is badalin islamarkaasina muuqda. Dhinaca kale mar uu hadalo kooban siiyey saxaafadda soomaalida aqoonyahan Qalinle ayuu kaga jawaabay su,aal aheyd “in soomaalidu eeysan suuqa shaqada ku badnaan la oran karro cunsurinomo lugu hayo” Wuxuu sheegay in cunsuriyadda ay jirto hadana aqoonta soomaalidu ay tahay mid xaddidan. Balse soomaalidu tahay dad jecel shaqada oo meelaha ay tagaan la qabsan karaan.
Isku soo duub siminaarkan oo ujeedkiisa ahaa in shaqaalaha ka howlgala hey’adaha kala duwan ee magaaladaasi, ayaa waxaa aad u koobnaa dadkii aan soomaalida aheyn oo siminaarkan la siinayey. Sidoo kale shaqsiyaadka soomaaliyeed oo iyagana soo xaadiray ay faro ku tiris ahaayeen. Wuxuuse ku soo dhamaaday jewi wanagasan .
Tirada warqadaha aan gaarin cidii loo diray oo siyaaday
Swedishka iyo sida ay u arkaan dhaqamada kala duwan
Daawo Sawirada: Soomaalida oo si qiiro leh u soo dibadbaxday iyo saxaafada Sweden oo si weyn wax uga qortay